Yakanakisa Special Rakaumbwa Bhegi Mugadziri uye Fekitori | Aosheng
Yakakosha chimiro bhegi inoshandiswa kudzivirira kubva mukusvibiswa. Semuenzaniso, Garment Suit Bag inoshandiswa kuchengetedza nguvo kubva mukusvibiswa, Sofa Bhegi rinoshandiswa kuchengetedza sofa kubva mukushatiswa, Bhagi rekugezera rinoshandiswa kuchengetedza muviri wako kubva mukusvibiswa, zvichingodaro. Izvo ndezve multifunctional epurasitiki inodzivirira bhegi.
Tsigiro yetsika yakaitwa
✦ Yakapetwa zvakapetwa ruoko saizi kuitira kuti zvive nyore kutakura nekushandisa.
Bhegi racho rinogona kuve rakapetwa kuita saizi ruoko kuti zvive nyore kutakura nekushandisa. Disposable chigadzirwa, yakachena uye nyore. Mutengi wevatengi anogona kudhindwa pakati pekugona kwedu. Iyo yakasarudzika chimiro bhegi yaizovandudza yako hupenyu hwehunhu, chengetedza vashandi / nguva nemari. Qingdao Aosheng Plastic Co., Ltd ari nyanzvi gadzira ane makore anopfuura makumi maviri 'ruzivo kuburitsa Pe epurasitiki masking firimu. Nomwoyo wose tariro pamwe nemi.
Yakakosha chimiro bhegi inoshandiswa kudzivirira kubva mukusvibiswa.
Semuenzaniso, Garment Suit Bag inoshandiswa kuchengetedza nguvo kubva mukusvibiswa, Sofa Bhegi rinoshandiswa kuchengetedza sofa kubva mukushatiswa, Bhagi rekugezera rinoshandiswa kuchengetedza muviri wako kubva mukusvibiswa, zvichingodaro.
Yedu yakakosha chimiro bhegi iri mukutsigira yetsika yakagadzirwa, asi ita shuwa kuti iri PE epurasitiki zvinhu. Izvo ndezve multifunctional epurasitiki inodzivirira bhegi.
Details: Special Rakaumbwa Bhegi
- Inogona kugadzirwa zvinoenderana neyako yakasarudzika chimiro.
- Logo inogona kudhindwa pakati pekugona kwedu.
Product aigona kuitwa maererano mutengi chaiyo chikumbiro.
→ Aosheng yakavakwa muna 1999, uye kutanga aivigirwa muna 2008.
→ Tine chitupa che ISO9001, BSCI, FSC uye zvichingodaro.
→ Chigadzirwa chiri pasi rese.
→ Tine timu yekutengesa yehunyanzvi, timu yeQC, research & timu yekusimudzira.
A: Kubva pane chaicho chigadzirwa.
Mubvunzo: Ndeupi ruzivo rwakakosha iwe rwaunoda kuziva?
A: Pls titiudze yako mashandisiro, kureba, upamhi, ukobvu uye kurongedza nzira.
Pashure: Disposable Plastic Gloves
Zvadaro: Steel Dispenser